I SIFTE ikomelise izitshuseni ezenze kahle – Sivubela intuthuko Newspaper
Izikhulu zakwa SIFTE nezitshudeni ezithole imikomelo
I Sugar Industry Trust Fund For Education ikomelise izitshudeni ezibalelwa ku 18 ebezifundiswa yimifundaze yale nhlangano.
Inhloso yalo mcimbi bekungukubungaza izitshudeni ezibalelwa ku 18 ezisanda kuphothula izifundo zazo, lezi zitshudeni ezenze kahle zihlomule ngama laptops amasha ceke. Phezu kwalokho i SIFTE yamukelise zonke izitshudeni ngezitifiketi eziqhakambisa impumelelo yazo kwezemfundo.
Enkulumeni yakhe yokwamukela izihambeli, uSihlalo we SIFTE u Tim Murray uthe kuyabajabulisa ukubona ukuthi ungakanani umehluko abawenza ezimpilweni zabantu ngalolu hlelo lwemifundaze.
“Kuyasikhuthaza kakhulu ukubona ukuthi ungakanani umehluko owenzekayo ngalolu hlelo. Selokhu lolu hlelo lwaqala, baningi abantu abasha abahlomulile asebekwazi ukuzimela nasebenezikhundla ezibalulekile emphakathini kanye nasezinkampanini abasebenza kuzo. Lesi sikhwama sesikhiqize abaholi abanohlonze kwezombusazwe okubalwa kubo u Dkt Bonginkosi Blade Nzimande, u Dkt Zweli Mkhize, u Judge President John Hlophe kanye no Dkt May Mashego ongunkosikazi ka Dkt Zweli Mkhize, ” ukusho u Murray.
Selokhu yaqala ngo 1965, i SITFE seyihlomulise izitshudeni ezibalelwa ku 10 000 ngethuba lokuphucula izimpilo zayo ngemfundo esezingeni eliphezulu. Unyaka nonyaka, i SITFE inikela ngemifundaze ebalelwa ku 41 kuzo zonke izitshudeni ezifanelekile ezidabuka Kwazulu-Natali nase Mpumalanga.